बारेमा एक व्यक्ति उच्च निधारमा के भन्न सक्छौं?
पक्कै पनि, तपाईं को धेरै कहिल्यै भनिन्छ जो physiognomy विज्ञान बारेमा सुनेको छु। यसलाई आफ्नो चरित्र र भाग्य कसरी एक व्यक्तिको उपस्थिति प्रभाव अध्ययन जो एक विज्ञान हो। वैज्ञानिकहरू अझै पनि सकेसम्म "एक व्यक्तिको अनुहार खुला पुस्तक हो पढ्नुहोस्" गर्न चाहे वाद छन्। एक हात मा, यो बस निरर्थक छ। खैर, र आफैलाई लागि न्यायाधीश एक उच्च निधारमा रूपमा व्यापक cheekbones केही क्षमता को मानिस मा विकास कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, अक्सर, यी अवलोकन साँचो हो। physiognomy अध्ययन गर्ने मानिसहरू आफ्नो बाह्य डाटा द्वारा प्रतिष्ठित मान्छे भेद गर्न सक्ने धेरै समूह पनि चिनाए। यस्तो अवलोकन विश्वास वा विश्वास छैन, एक निजी कुरा। र हामी यस लेखमा उदाहरणका लागि, एक उच्च निधारमा व्यक्ति को प्रकटीकरण असर कुनै पनि अद्वितीय क्षमता, अन्दाज लगाउनु गर्न प्रयास गर्नुहोस्, र के गुण त्यस्ता मानिसहरूलाई मा निहित छन्।
तपाईँले एक मानिस निधारमा के बताउन सक्नुहुन्छ
गरेको physiognomy संलग्न भएको व्यवसायीक बारी र व्यक्तिले आफ्नो निधारमा बताउन सक्नुहुन्छ के पत्ता गरौं। यसलाई दीर्घकालीन अवलोकन कि फेला परेन:
- एक उच्च निधारमा - बुद्धि को एक चिन्ह। र निधारमा समतल हो भने, मानिस केही प्रतिभा छ। र यदि एक convex निधारमा, यो बुद्धि र प्रतिभा बताइएको;
- कम निधारमा - अलग को चिन्ह र निकट पागल। यदि यो बेला अझै पनि सपाट, यो अघि तपाईं केहि बारेमा हेम कुरा मायालु, जन्माई भन्ने कुरा स्पष्ट छ। Convex व्यापक निधारमा यसको मालिक को धनी कल्पना बताइएको छ। तर, व्यवहार मा, अक्सर यस्ता मानिसहरूलाई पागल पहिचान हो, र आफ्नो कल्पनामा - एक बिरामी कल्पना को फल;
- ठूलो निधारमा - आलस्य को एक चिन्ह। यो यस्तो व्यक्ति जीवनमा सफल हुनेछ असम्भाव्य छ;
- साँघुरो निधारमा - भलाइ र इमानदार चिन्ह। यस्तो सुविधाहरू मालिक - कुनै पनि कम्पनी को प्राण। त्यो बारे मानिसहरू हितोपदेश राखे छ: "। एक सय rubles, र एक सय मित्र छैन" दुर्भाग्यवश, वित्तीय अवस्था अक्सर चाहेको गर्न धेरै छोड्दा;
- धेरै प्रमुख निधारमा - rancor र लिएको बदलाको प्रकृति को एक चिन्ह। यी टाढा रहन राम्रो मान्छे देखि;
- धेरै व्यापक निधारमा - अहङ्कारको को चिन्ह। घमण्डी र contemptuous टोन condescending मुस्कान अक्सर तिनीहरूलाई संग सम्बन्धित;
एक उच्च निधारमा सफल मानिस के हुनेछ मा
एक उच्च निधारमा देखि - बुद्धि को एक चिन्ह, यो यसको मालिक विज्ञान को खोज छ मा एक सफलता हुनेछ मान गर्न उचित छ। यो गर्न सकिँदैन र गणित र भौतिक, र औषधी र इतिहास, र यति मा। तार्किक कारण mentality त्यस्ता मानिसहरूलाई वैज्ञानिक आविष्कारहरू धेरै गर्न सक्षम छन्। तर घरमा तिनीहरूले भद्दा र डर्ट छन्। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कुनै ठूलो सफलता हो। अक्सर यो किनभने निःशुल्क समय banal कमी छ।
एक उच्च निधारमा लुकाउन कपाल को मद्दतले रूपमा
तिनीहरूले यसलाई बुद्धि को एक चिन्ह अनुहार गर्व हुन सक्छ को यस्तो एक प्रमुख भाग हो, र यसरी भन्न हुनत, धेरै महिला यो आफ्नो उपस्थिति एउटा बेफाइदा पाउन। तिनीहरूले ध्यान दिएर रुप बदल्नु यो "दोष" अक्सर एकदम सही छैन। परिणाम उल्टो परिणाम हो - अनुहार को यो भाग साँच्चै हास्यास्पद र कुरूप देखिन्छ। म तपाईंलाई एउटा ठीक चुनिएको केश यसलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ तपाईं कसरी बताउन छौँ। त्यसैले, एक उच्च निधारमा लुकाउन कसरी? Hairstyles सिफारिस छन्:
- बाक्लो लामो अमिल्दो fringe;
- वर्ग माथि बाक्लो fringe आफ्नो काँध;
- लामो, घुम्रेको कपाल आवश्यक;
- bangs संग मध्यम कपाल मा सैलुन क्यासकेड।
उच्च निधारमा को मालिक, कि सम्झना उच्च बाल तिनीहरूले अनुहार माथिल्लो भाग मा थप मात्रा सिर्जना रूपमा, तपाईं को लागि छैन। र यो आफ्नो मामला मनमोहक छैन छ।
रूपमा भने गरिएको छ के बाट देख्न सकिन्छ, एक उच्च निधारमा - उपस्थिति को एक कमी र मर्यादा, जो गर्व हुन। र यदि तपाईं अझै पनि disproportionate द्वारा भ्रमित छन् अनुहार सुविधाहरू, यसलाई सधैं कपाल को मद्दतले सही गर्न सकिन्छ।
तिनीहरूले के हो - एक नेता को गुण?
धारणा: यसको प्रकार र गुण
को psyche को सुरक्षा संयन्त्र
समानुभूति के हो? यो भावना बारेमा केही रोचक
हुनेछ: मनोविज्ञान जानकारी विकल्प
1958: पूर्वी पात्रो एक एक वर्ष?
प्रकार र प्रविधी: खैरो कपाल Staining। खैरो कपाल मा Balayazh
यात्रा - के यो हो? शब्द "यात्रा" को अर्थ
आत्म-शिक्षा को सार र व्यक्तिगत र समाज को लागि आफ्नो भूमिका
ईन्जिनियरिङ् Izon मा रचनात्मकता: ठूलो र सानो लागि योजना हुक
बिस्तर फ्ली: फोटो बाइट्स, कसरी ती
घर "Maynkrafta" - आफ्नो बच्चाको कल्पना विकास लागि एक महान उपकरण!
चिनियाँ विमान वाहक "लिओनिंग": प्राविधिक विनिर्देशों र फोटो
गिल्बर्ट गरेको सिंड्रोम। आफ्नो निदान, नतिजा
जीवन र मृत्यु Freak
नाक को अस्तर को सुनिंनु: उपचार।